IHonduras: Iindlela eziGwenxa okanye ezinokuSebenza- iGeofumadas
I-Honduras: ezinye izinto eziphambeneyo okanye ezifanelekileyo
... awubhalelanga kum iintsuku
Ngaba bathatha inthanethi?
okanye ukuba wena usezitratweni
Okanye ngaba ungandithandi?
yakho ingubo yezinyembezi: iblogi
IHonduras ibuyile kwibala lomhlaba, emva kokuncinci kwathethwa ngesi siqwenga sephazili esasihlala ngenkani kwi-Central American isthmus. Iindaba ezimbalwa ebezifundwe ngaphandle bezisele ziphelelwe lixesha, iNkanyamba uMitch, umongameli esitya imelon, abasindileyo kwiiKeys Pigs, ngamafutshane, baya phesheya kancinci kwaye bahlala kukungakhathali kwabo bangazange batyelele ummandla we-Central America, ngubani inenkcubeko enkulu, indalo kunye nobutyebi bembali.
Kodwa ekugqibeleni, emva kweveki yenkathazo, namhlanje kuza eHonduras uNobhala Jikelele weZizwe eziManyeneyo, njengoko, njengoko kwaziwa, yenza imali kunye ñurda kunye neentsuku, kuza kunye nokungafihli, kodwa awazi ukuba ukubuza okanye ukuxelela nangaphambi kokuba kwenzeke oku, nantsi ezinye iindlela ezivela kwintetho yam nenhlanzi yegolide e-Macondo:
1 Ukuba akukho nto ingabikho, uZelaya kufuneka abuyele ekupheleni kweenyanga ezintandathu
Esi inokuba sisikhundla semibutho yamazwe aphesheya athe uZelaya wayifumana inkxaso, nangona kunjalo, ukwahlulahlula phakathi kweli lizwe kunzima ngenxa yekhonkco elinalo kunye nomgaqo weChávez. Kuya kusiba nzima ngakumbi ukuba kunjalo, isiphithiphithi siza kuqhubeka kangangeenyanga ezintandathu, kwaye ngubani owaziyo ukuba angazithatha na izinto ezenzekileyo kwezi ntsuku njengezingekho mthethweni, njengokuvuma kohlaziyo kumthetho woomasipala (olungele wonke umntu) , kunye nezityholo ezikhoyo kwikhabhinethi yakhe.
Omnye umba kunzima oku kuya kuba amaziko discrediting karhulumente engaphephekiyo okanye noluntu abaye bavakalisa ingxabano okanye ngokungekho mthethweni kunye nezenzo isebe yesigqeba, ezifana iNkundla ePhakamileyo, Congress, Ofisi zoLuntu yoMtshutshisi, iCawa yamaKatolika, Evangelical Church, uMkomishinala Amalungelo oluntu, iiArmed Forces, phakathi kwabanye.
2 Ukuzama ukulungisa isantya ngokubhenela kunye nabantu ukuba bathathe isigqibo
Oku kuphuma kuphakanyiswe ngamaLungelo oluntu, athi ngokusetyenziswa kwezomthetho ukuvota kunye nokulawulwa kwemibutho yamazwe ngamazwe, abantu banquma ukuba bafuna ukuba uZelaya abuyisele okanye cha.
Ngale nto singonwaba sonke, sinyamezele nokuba sithini na isigqibo kwezi nyanga zintandathu zilandelayo ezishiyekileyo kude kube lunyulo olucwangciselwe uNovemba ka-2009. Ukuba iimvakalelo ezimnyama zilahliwe, singaphila kwisiphithiphithi ... kunzima kodwa kuyindlela .
3 Ukuba urhulumente wesikhashana unquma ukungaxoxiswana
Kuya kuthetha ukuba kukho isikhundla esigqithisileyo, apho bangafuni ukwamkela naluphi na uhlobo lwesivumelwano ukuze kuzuze uxolo, bade baphike ukhetho lwe-referendum ngesiseko sokuba yonke into eyenzekileyo iphakathi komthetho. Oku kuyakwenza ukuba ilizwe lilwe kwilizwe liphela ukuze libonakale liyinyani into ebonakala ngathi bubuxoki obucetywayo ngabo babonakala ngathi bangamaxoki kwabo bahlala bexoka kuthi, kunye nengxwabangxwaba yezentlalo exhasa uZelaya eya kuthi iphele ifuna inkxaso yasekhohlo. .
Into eyonakalisayo malunga noku kukuba imfazwe yamakhaya ayinakuphepheka, kuba njengoko kwenzekile e-El Salvador, imali kunye nezixhobo ziya kungena zivela kumda we-Chavismo kwaye kukho enye into ebangela ukuba imeko ibe mandundu: ukubangaba ukurhweba ngeziyobisi nolwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo kuyabandakanyeka, intshukumo ayinakuyekiswa. E-El Salvador, ekhohlo iphumelele idabi kummandla weentaba, ophantsi ngokweepesenti; e Honduras, wonke ummandla weentaba, onokuthi unike ikhohlo elinye ithuba.
4 Ukuba i-ideology iyabetha i-nees
Oku kungathetha ukuba i-United States ne-Venezuela bazobe ezinzulwini zamanqindi abo ngenjongo yokuthatha icala ngeenjongo zokukhulisa izinto (isikhalo esibuhlungu esingavakaliyo kodwa sonke siyazi ukuba konke oku kuhamba kunye negqwirha elimnyama kumdlalo bhanyabhanya "Ostreliya" ). Kuthetha ukuba iVenezuela izakufuna imeko yasekhohlo yokuthatha indawo ebalulekileyo kuMbindi Merika, enye kuneNicaragua (ebisoloko ikho), i-El Salvador (apho i-FMLN iphumelele unyulo) kunye neGuatemala (nangona ingekho umbala unikiwe, kukwindlela yasekhohlo). Kodwa kwelinye icala, ukuba iUnited States izama ukuphinda ibuyele emhlabeni. Oku kuyathandabuzeka kuba u-Obama ungene ngeprofayile esezantsi, kwaye njengoko sibona izinto, isicwangciso esimalunga ne-Iraq kukurhoxa endaweni yokuthetha iinyani zomzabalazo welinye ilizwe; kwaye eUnited States, iHonduras yindawo engabalulekanga kwitafile. Kodwa andicingi ukuba ucinga ukuba Chavista ayibalulekanga, esele iquka amazwe aliqela kumazantsi e-cone kunye nakuMbindi Merika, kwaye ikwanobudlelwane obuqinileyo ne-Communist China ne-Iran.
Ukuba umzabalazo weengcamango ungena kulo mbandela, sonke siza kulahleka, kuba kuyafana nomzabalazo wenkolo, okungekho mntu wakwazi ukusixelela ngokucacileyo ngaphandle kokunyanzela ukuxolelwa emva kwekhulu leminyaka.
Yonke imihla imatshi yokuzikhusela okanye ngokuchasene nomongameli inkulu, kodwa ngaphandle kokuvela okanye izindululo. Kuphela zizikhalazo zemibongo ezinokuphela ekubeni izinto zisonjululwe kwinqanaba lezopolitiko kwaye iinguqu eziyimfuneko azenziwanga.
Nantoni na eyenzekayo, sifuna uxolo kwaye ilizwe lithatha utshintsho olufunekayo.
Iifoto zithathwe kwiFlickr Ingxaki eHonduras.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukwazi ukuba bangaphi abantu abahambayo
Post Next IHonduras yakhetha enye indlela yesithathuOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Honduras: iindlela ezinxaxhileyo okanye ezinokubakho"
Ndiya kuKhetho 2 ...